Kofehy Coluracetam roat (135463-81-9) - Phcoker
SKU: 135463-81-9 Sokajy: Drug Smart
Vovon-kena Coluracetam roah (135463-81-9) video
Ny kofehy Coluracetam Raw (MKC-231) dia racetam ny synthetic racetam izay voalaza fa tsy mifangaro. Tsy misy porofo marobe manadihady izany, fa ny mekanisma amin'ny asa (toy ny strukture) dia toa samy hafa amin'ny rakitra hafa toy ny Piracetam na Aniracetam.
Ny voankazo Coluracetam Raw appears to be interacting with a process known as high choline absorption (HACU for short), which is the step-limiting step of drawing choline into a neuron for synthesis into the acetylcholine neurotransmitter. Ny fampitomboana ny tahan'ny HACU dia mampitombo ny asan'ny neurons cholinergic, noho izany dia lasibatry ny faniriana kognitika.
Vovon-kolaka roche (135463-81-9) Specifications
Product Name Vovon-doko Coluracetam
Anarana simika N-(2,3-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrofuro[2,3-b]quinolin-4-yl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
molekiolan'ny Formula C19H23N3O3
molekiolan'ny Wvalo 389.4
Monoisotopic Mass 341.174 g / mol
Color Mavokely ho an'i Cyrstalline Solid
Solubility Tsy misy angona azo ampiasaina
Coluracetam Application Ny kofehy Coluracetam Raw (MKC-231) dia racetam ny synthetic racetam izay voalaza fa tsy mifangaro.
Vovon-koditra roahin'ny kalsa (135463-81-9) Description
Coluracetam (MKC-231) dia fanafody racetam synthetique izay asongadina ho rakotra hafanana. Ny fikarohana dia manoro hevitra fa afaka manatsara ny fahalalana sy ny fahatsiarovan-tena izy, ary milaza ny mpampiasa fa manatsara ny fifantohana, ny fifantohana ary ny fahitana.
Ny poofa Coluracetam dia singa voalohany indrindra amin'ny fampitomboana choline izay mampihetsi-pandrefesana ny fonosana fahatsiarovan-tena. Manatsara manokana ny fihenan'ny choline avo lenta, mampitombo ny haavon'ny neurotransmitter acetylcholine amin'ny fanomezana kokoa ny choline izay nanaovana azy. Satria ny acetylcholine no mpiray tampo amin'ny neurotransmitter akaiky indrindra amin'ny fahatsiarovana sy ny fahatsiarovan-tena, dia heverina fa io asa io no loharanon-kery fototra amin'ny fahaiza-mitantana ny coluracetam.
Tena mafy ny Coluracetam ary mitaky dingana kely kokoa noho ny classe hafa an'ny racetam nootropics. Mihetsika haingana izy io, mahatratra ny haavony avo amin'ny plasma ao anatin'ny 30 minitra fanindroany, saingy ao anatin'ny telo ora ny ambaratonga.
Raw Coluracetam poids (135463-81-9) Mekanisma amin'ny asa
Ny Coluracetam dia mampitombo ny fihenan'ny kolon-tsakafo (HACU), izay ny dipoavatra amin'ny dingan'ny acetylcholine (ACh). Ny fandinihana dia nampiseho poofa coluracetam hanatsarana ny fianjeran'ny fianarana amin'ny doka iray am-bava nomena amin'ny raty izay niharan'ny neurotoxine cholinergic. Ny fanadihadihana manaraka dia naneho fa mety miteraka vokatra mitongilana maharitra eo amin'ny ratifon'ny kôlerinera neurotoxine izy ireo amin'ny fanovana ny rafitra fanaraha-maso ny choline.
soa amin'ny vovon-koditra vita amin'ny Coluracetam (135463-81-9)
Coluracetam dia afaka manatsara ny fahatsiarovana sy ny fahaiza-mianatra
Ny Coluracetam dia afaka manampy amin'ny fitsaboana ny fahaketrahana mampidi-doza
Ny Coluracetam dia afaka mampihena ny ahiahy sy ny fanahiana
Coluracetam dia mety hanohana ny neurogenesis (fitomboan'ny sela nerve)
Coluracetam dia afaka manampy amin'ny fitsaboana skizophrenia
Coluracetam dia afaka manatsara ny masonao
Vokatry ny Coluracetam (135463-81-9) Dosage
Ny ankamaroan'ny fikarohana momba ny coluracetam dia natao tamin'ny biby fa tsy ny olombelona, ​​noho izany dia tsy misy fitsipika momba ny dosage azo ekena amin'ny ankapobeny. Ny dingana mahery vaika dia voafaritra ho 5-20 mg. Ireo mpampiasa ny coluracetam dia nitatitra dingana maro isan-karazany nitantana an-tsokosoko sy an-tampony.
Ny fanehoan-kevitry ny mpampiasa koa dia nanamarika fa ny fandeferana amin'ny volo-kilaônera dia mety hivoatra haingana. Tahaka ny fanafody rehetra, indrindra fa ny nootropik, dia tsara ny manomboka amin'ny doses kely ary manomboka ny doka tsikelikely araka ny fanehoan-kevitry ny vatanao sy ny fanitsiana ny fanafody. Tsy misy poizina ny Coluracetam ary heverina ho azo ekena sy azo antoka.
Side effects of Coluracetam powder (135463-81-9)
Ny poofa Coluracetam dia tsy misy poizina. Noho izany dia heverina ho mendri-piderana sy azo antoka.
Zava-mahadomelina ny tsimok'aretina saingy mety ahitana ny fanahiana, ny reraka, ny aretim-po, ny hatairana sy ny hafetsifetsena. Indraindray, ny vokany dia matetika vokatry ny dipoavatra avo lenta amin'ny tsy mitongilana.
Maro ireo mpisera voalohany amin'ny Coluracetam no mitatitra ny reraka izay matetika vokatry ny manomboka amin'ny dose avo loatra.
Roham-Pikamilone vita amin'ny pikamilone (62936-56-5)
Ny poofa vita amin'ny pikamilone Pikamilone dia mampitombo ny fiasan'ny atidoha, manatsara ny fahatsiarovan-tena, ny fifantohana, ny antony manosika, ny faharetan'ny fotoana, ary ......